Mabhuku aIldefonso Falcones, bhuku rekutsikisa kubvira 2006 | Zvazvino Zvinyorwa
Ildefonso Falcones mabhuku
Ildefonso Falcones mabhuku.
Mabhuku aIldefonso Falcones deSierra anokosha zvinyorwa. Uyu ndiye mumwe wevakakurumbira vanyori vechiCatalan vezana ramakumi maviri nemasere. Gweta nebasa, akaberekerwa mumhuri yakapfuma, yakakanganiswa mushure mekufa kwababa vake. Naizvozvo, akamanikidzwa kutarisana ne "chokwadi chakaomarara" chenyika kuti abudirire.
Chikamu chekuzivikanwa kwemunyori weBarcelona ndechekukakavadzana kwakamuka kwakatenderedza hupenyu hwake hwepachivande. Akave akasarudzwa pazviitiko zviviri zvekunzvenga mutero. Iyo Audiencia de Barcelona inomupomera mhosva yekugadzira zano rakanyanyisa kuitira kuti arege kuzivisa purofiti yakatorwa mumabasa ake. Pakutanga, akakwanisa kunzvenga kutongwa, asi makore mashanu gare gare, haana kusangana nedambudziko rakafanana.
1 Ildefonso Falcones uye "Rwendo rweGamba"
1.1 Falcones, protagonist
1.2 Pakati pemutemo nemabhuku
2 Kereke huru yegungwa
3 Iyo Falcones maitiro
4 "Flat" magamba nemakakatanwa epamutemo
5 Kubudirira chete
6 Mamwe mabhuku: kupfuura Catalonia
8 Iyo yakafanana zano (kana iyo "chaiyo" nyaya)
Ildefonso Falcones uye "Rwendo rweGamba"
Hupenyu hwaIldefonso Falcones hunoratidzika kunge hunoenderana nedzidziso ye "Rwendo rweGamba". Icho chimiro chechinyorwa chakatsanangurwa neAmerican mythologist Joseph Campbell mubhuku rake Iyo gamba ine chiuru kumeso (1949). Fomula yakatsanangurwa nemunyori wezvefirimu Robert McKee mubhuku rake Iyo script (1997).
Zvakare kutaura, iyi ndiyo nzira yakajairika yakafambiswa nevose protagonists mufirimu. Chinyorwa chinoshanda, kune imwe nhanho, kutorwa seyakanyanya kujekesa "vhezheni" yemaonero aAristotle mune yake Nhetembo. Iyo zvakare yakajairika rondedzero chirongwa mumabhuku, firimu, uye nehunyanzvi hwekuita. Iyo zvakare Falcones 'inofarira nzira yekutaura nyaya.
Akazvarwa muBarcelona (1959), rwendo rwe "gamba" rweFalcones runotanga pazera remakore gumi nemanomwe. Izvi, paakawana chinzvimbo chekutanga mumutambo wejunior yenyika equestrian muSalto. Nekudaro, kufa kamwe kamwe kwababa vake kwakamumanikidza kuti asiye tsika yemitambo.
Pakati pemutemo nemabhuku
Dambudziko remhuri rakamumanikidza kutsvaga basa kuti abhadhare zvidzidzo zvake zvekuyunivhesiti. Nekudaro, achangowana basa muhoro yebhingo. Chibayiro chakange chakakodzera. akapedza kudzidza segweta uye aive nebasa rakabudirira kwazvo segweta. Pamwe chete nemunin'ina wake uye nemumwe waakashanda naye, akatanga hofisi muBarcelona yakamupa kugadzikana mune zvemari.
Asi kukunda kwechokwadi kwakatsvakwa neFalcones kwaive kuchiri kuuya. Kubva achiri mudiki aida kuva munyori, asi hupenyu hwehupenyu hwakanga hwazvidzivirira. Nguva pfupi mireniyumu nyowani isati yatanga, aine makore angangoita makumi maviri achitevedzera mutemo, aive agadzirira kutevedzera kudana kwake kwechokwadi.
Kereke huru yegungwa
Muna 2006 - kwete pasina matambudziko ekuburitswa kwayo - Ildefonso Falcones 'yekutanga firimu yakarova muzvitoro zvemabhuku. Kushamisika kwevazhinji, iye (ipapo) munyori asingazivikanwe akazova wekutanga mukutengesa kuSpain. Mumwedzi miviri chete, anopfuura makopi mazana mashanu akatumirwa, ese muchiSpanish nechiCatalan.
Kereke huru yegungwa.
Unogona kutenga bhuku pano: Kereke huru yegungwa
Kubudirira kwakapfuura miganhu. Kubva muna 2007, yakatanga kushandurirwa mune mimwe mitauro, parizvino ichisvika gumi neshanu. Muna 15 yakakwakuka kuenda kune yekuteerera nyika nekutenda kuna Antena 2018. Chiteshi cheterevhizheni cheSpanish chakaburitsa zvakateerana zvezvitsauko zvisere zvakatsvaira nyika. kugadzirisa.
Iyo Falcones maitiro
Zvakaipa here kuva fomula munyori? Iyi ndiyo gakava isina kubvumirana kana magumo angangodaro. Nhaurirano pakati pemativi matatu akanyatsosiyaniswa: avo vanokanganisa vanyori nefomula, boka richitsigira aya ne "ari-pakati. Pakupedzisira, chero munyori anozivikanwa anobvunzwa nezverudzi urwu rwechinhu.
Kana Falcones yaifanira kupindura, akazviita mumunhu wekutanga, achizvitsanangura. Iwe hauna kupokana kunzi "munyori webhizinesi." Muchokwadi, anogara pachena kuti anofarira kuve "mutengesi mukuru" pane iye anonzi "munyori" munyori. Chirevo chiri pachena chiri kutarisa mazita ayo mashanu akabudirira kwazvo.
"Flat" magamba nemakakatanwa epamutemo
Kunakidzwa. Ichi ndicho chimwe chevadzidzi vanonyanya kushandiswa kutsanangura zvinyorwa zvemunyori wechiCatalan. Zviri nyore kuverenga, kupenya uye kugaya. Zvichida iyo-iyo-dimension yevamwe vatambi vake yakanyanyiswa. Kupesana kusingazungunuke pakati pevanhu vakanaka nevakaipa ... uye chete magweta anosara ari pakati.
Kudzidziswa kwaFalcones semutongi kuri pachena muchirongwa chenyaya dzake. Haangori chete kugona chidzidzo uye kuziva mitemo nemusoro, zvinoratidza kuti ndechimwe chinhu chaanofarira. Ndicho chaizvo chinhu ichi chiri chechokwadi uye chakasarudzika chimiro chebasa rake. Uye pamwe nerondedzero dzema cinematic yenzvimbo dzavanogara, vanowedzera kubata kwesimba rakasarudzika.
Kune vanyori, idambudziko rakakura kupona kubudirira kweye yavo yekutanga dhizaini. Izvi hazvishamise, nenzira imwechete zvinoitika nevaimbi. Pane zviitiko zvakawanda zvevanyori vebhuku rimwe chete, zvisinei nemhando yezvinyorwa zvinorangarirwa neveruzhinji uye / kana kushoropodzwa kwemabhuku.
Iyo mamiriro ezvinhu akaitika mune - ingangoita nzira yechisikigo, kunyange pasina munhu anoziva chaizvo kuti sei. Izvo hazvisizvo nezve Falcones. Kunyangwe Kereke huru yegungwa Iri richiri basa rake rinozivikanwa kwazvo, rake rekupedzisira basa harina kuodza moyo veruzhinji. Kana kune vaparidzi, vari kufara kwazvo nenhamba dzekutengesa.
Quote naIldefonso Falcones.
Mamwe mabhuku: kupfuura Catalonia
Fatima ruoko (2009) raive bhuku rechipiri rakasainwa naIldefonso Falcones. Zvekare mukati mechikamu che "nhoroondo yekunyepedzera" (ino nguva kunze kwekuzvarwa kwake Catalonia). Granada, Andalusia, yaizove inzvimbo huru yekukakavadzana kwakazara nemakakatanwa asingaperi pakati pevaMuslim nevaKristu. Zvakaenzana, Mambokadzi asina shangu (2013) inyaya yakatanga mudunhu reAndalusia, muSeville.
Inotaurira zviitiko zvemuranda mutema uyo akauya achibva kuCuba uye mukadzi asina hunhu uye anopandukira wechiGypsy ari pakati penzvimbo yekusarura muzana ramakore regumi nemanomwe Spain. Hazvigoneke rudo uye vagaries yehutsinye magumo haigone kusavapo. Madrid inoshanda senzvimbo yechikamu chekupedzisira chenyaya, umo vanhu vanotanga kupandukira kurongeka kwakatemwa.
Vagari venhaka yenyika (2016) kwaisave kungodzokera kuCatalonia kweFalcones, iko kutsva kutsvaga kwe "zvakasikwa" izvo zvakamuita mukurumbira. Chinyorwa ichi kuenderera kwakananga kwe Kereke huru yegungwa, rakabudiswa makore gumi chete mushure mebhuku rakatangira. Iwo mafeni emunyori uye yake yekutanga-dangwe runyorwa vakafadzwa neichi chitsva chikamu cheiyo Middle Aval Barcelona.
Kodzero dzevashandi uye kurwisana nemabourgeoisie zvinoshanda senzvimbo yekumashure yenyaya yerudo nyowani: Iyo pendi yemweya (2019). Mumwe mufananidzo weBarcelona, ​​ino nguva pakutanga kwezana ramakumi maviri. Kunze kwerudo uye kukakavara kwekirasi, ndiyo Chechi yeKaturike inopedzisira yave kubuda semupikisi mukuru.
Iyo yakafanana zano (kana iyo "chaiyo" nyaya)
Mumashoko emunyori, Iyo pendi yemweya iwo mubatanidzwa wemakakatanwa evanhu pakati pezvinodiwa nezviri kutsvakwa chaizvo. Ingori nekuburitswa kwebhuku racho, iyo nhau nezve gomarara rakatambura naIldefonso Falcones yakaonekwa. Chinhu chitsva mukati mechirongwa chake neasina kujeka, kunyangwe kubudirira kwake mukutengesa.
Pamusoro pezvo, yako mutero wekunzvenga kutongwa inogona kupera nemutongo unosvika makore mapfumbamwe mutirongo. Iyi nyaya ichave nekukanganisa kusingatarisirwi? Ko iro gamba richakwanisa kukunda zvipingamupinyi zvese uye kusvika pakununurwa kwekupedzisira? Inguva chete ndiyo ichaudza. Ichokwadi chete mukutarisana nemhedzisiro inogoneka ndeyekuti Mabhuku aIldefonso Falcones anozogara munguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Ildefonso Falcones mabhuku
Domingo Villar. "Ndakagara ndichifadzwa negungwa"